WARBIXIN: Macallin Unai Emery oo shan Kabtan u magacaabaya Kooxda Arsenal – Gool FM
WARBIXIN: Macallin Unai Emery oo shan Kabtan u magacaabaya Kooxda Arsenal
Byare July 13, 2018
(London) 13 Luulyo 2018. Macallinka cusub ee kooxda Arsenal Unai Emery ayaa shaaca ka qaaday inuu qorshaynayo inuu shan kabtan u magacaabo shaqadiisa xilli ciyaareedkan 2018-19.
Kabtankii hore ee kooxda Arsenal Per Mertesacker ayaa ciyaaraha isaga fariistay dhammaadkii xilli ciyaareedkii hore, halka Laurent Koscielny kaasoo calaamadda hoggaaminta u xirnaa Gunners inta badan Ololihii la soo dhaafay uu seegay labadii bilood ee ugu horreeyey xilli ciyaareedka cusub sababo la xiriira dhaawac qeybta dambe ee lugta ah.
Tababare Emery ayaa qirtay in Koscielny uu noqon doono mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha kooxda, laakiin uu qorshaynyo inuu magacaabo Kabtanno kale oo shaxdiisa ah.
“Waan ka wada hadalnay middaa, fikradeydu waa inaan barto ciyaaryahan kasta iyo inaan garto sidoo kale shaqsiyadda ciyaartoyda. intaa kaddib waxaan aaminsanahay in fikradeyda ugu horreysa ay tahay inaan kooxda ku haysto 5- Kabtan, laakiin waqti xaadirkan ma garanayo Magacyadooda” ayuu Suxufiyiinta u sheegay Emery.
“Waxaan doonayaa inaan ogaado waxbadan sidoo kale, ugu horreyn Koscielny iminka waa kabtanka koowaad ee kooxda aniga ahaana xushmad ayaan u hayaa middaa, waa eegaynaa oo raadineynaa, waa kuwee ciyaartoyda ay shaqsiyadooda ugu fiican tahay qolka dhar badalashada. Waxaan dooneynaa inaan sii xushmeyno ciyaartoydaas aana helno Kabtanka aana si fiican u dooranno ciyaaryahanka ugu fiican midaa.”
“Labada Usbuuc ee noogu horreysa waa inaan bilownaa inaan barano kooxda, barano ciyaartoyda, barano dhammaan dadka inala shaqeynaya innaga.”
“Tababare kasta wuxuu u baahan yahay inuu barto ciyaartoyda. Ma’ahan in tababarayaasha oo idil ay xiriir la leeyihiin ciyaaryahan aniguna waxaan leeyahay shaqsiyadeeda
“Waxaan doonayaa inaan ku garto fikradeyda tooska ah, wada hadalkeyga tooska ah ee ciyaaryahanka.”
“Waxaan heystaa Macaluumaad ciyaartoyda kooxda aan ka helay dadka igu hareereysan, Macluumaadka Arsene Wenger sidoo kale waa ii muhiim aniga, laakiin tan ugu fiican waa xiriirkeyga tooska ah iyo wada sheekeysiga aan ciyaartoyda la sameeyo.”
Emery ayaa kulankiisa ugu horreeya kooxda Gunners laylin doona kulanka ay wajahayaan kooxda difacanaysa horyaalka Ingiriiska ee Manchester City kulanka furitaanka Premier League xilli ciyaareedkan.
Ivan Rakitic oo markale ugu baaqay FIFA in abaal marinta xiddiga adduunka la siiyo Luka Modric
Luciano Spalletti oo hadalkan ugu hanjabay Cristiano Ronaldo kadib imaatinkiisa Juventus